''Somaaleerraa baqannee dhufne, ammas baqarratti argamna'' - BBC News Afaan Oromoo
''Somaaleerraa baqannee dhufne, ammas baqarratti argamna''
Magaalaa Harar Mooraa kaamppii Hammarreessaa lafa lammiileen Oromoo naannoo Sumaaleerraa buqqaafaman itti dahantaniitti, dhukaasa raayyaa ittisa biyyaatiin banameen lubbuun namoota jaha battalumatti kan darbe yoo ta'u, hedduurras miidhaan ga'u BBC'tti himan.
''Akkuma cittoorratti fanxoo jedhamu, ummata baqatee mooraa keessa jiruufi waan dhuguu fi waan nyaatu eeggataa jiru rasaasaan ajjeesuun roorroo nutti cimseera,'' jechuun ture Ahimad Tamaam BBC'tti kan hime.
''Rasaasaan nu baasanii rasaasaan nu simatan'' kan jedhu jiraataan kaampichaa Ahmaddiin, kaleessarraa eegalee dhukaasa baqachuun dhokatee ala jiru jedheera. Maddi nageenya dhabiinsa baqattootaa gocha raayyaa ittisa biyyaati jedha.
''alqaba konkolaataa wal harkisee Finfinneerraa gara Somaalee imalaa jiruu poolisoonni Oromiyaa fi qeerroon sakatta'amu qabaata wayita jedhaan battalumatti humni waraanaa achii dhufeensaa hin beekamne rasaasa itti gadi qabuun ummatatti roobsuu eegale'' jedha.
''Mooraan poolisoota Oromiyaatiin eegamaa ture raayyaa ittisa biyyaatiin battaluma marfamee roorroon nutti hammaannaan baqannee baaneera. Somaaleerraas baqannee garana dhufnee ammas baqarratti baqi nuuf dabalame, qaama mootummaarraas namni nuuf birmate hin jiru,'' jedha Ahmaddiin.
Ergasiis ummati mooraa keessa jiru hatattamaan mooraa gadi dhiisee akka bahu doorsisaa jiru kan jedhu Ahmaddiin mootummaan naannoo Oromiyaa hatattamaan akka isaaniif birmatuuf gaafata.
Baqataa biraan mooraa hammaaressaa miliqee ala jiru Keeraddiin roorroon inni alanaa haala hin eegamneen nurra ga'e jedha.
''Dargaggoonni konkolaataa meeshaa kontirabaandii fe'ee gara Somaalee imalaa ture qabanii akka sakatta'amuuf wayita gaafatan warri konkolaataarra turan, bilbilanii humna waraanaa waammatan,'' jechuun BBC'tti kan himan baqataan kaampichaa Obbo Keeraddiin.
''Raayyaan ittisaas akkuma dhufeen osoo dhimmicha tasgabbiin hin ilaaliin dhukaasa eegale. Sana booda mooricha eegaa kan turan poolisoonni Oromiyaa akka raayyaa ittisaa mooraa hin seenne wayita ittisuutti kallattiin gara poolisoota Oromiyaatti dhukaasuun poolisii Oromiyaa tokko ajjeesanii tokko madeessan,'' jedhaniiru Keeraddiin.
''Raayyaan ittisa biyyaa kan dhukaasa nurratti bane, lubbuu namaarra meeshaa kontirabaandii waan mararsiifateef mootummaan naannoo Oromiyaa dafee nu bira goruu qaba,'' jedha Keeraddiin.
Namoonni miidhaan irra ga'e Hospitaala Caffee/Hiwot Faanaa fi Jogolitti yaalamaa jiru. Hospitaala Caffeetti ogeessa fayyaa kan ta'e Alamaayyoo Kafanii gama isaatiin, namoonni miidhamanii isaan biratti yaalamaa jiran wal'aansa jalqabaa haa argataniyyuu malee miidhaa irra ga'erraa dandamachuuf yaala dabalataa barbaadu jedha.
''Namoonni asitti yaalamaa dhufaniis kanneen rasaasni kallattiin itti dhuka'eedha. Kaan isaanii kallattiidhaan garaarra, luka, mataa, dugda keessaa fi harkarra rukutaman waan jiraniif tajaajila yaalaa gargaraa kennaa jira Hospitaalichi,'' jedhan Obbo Alamaayyoon.
Namoonni kunneen bakka raayyaan ittisa biyyaa fi poolisoonni federaalaa argamanitti yoomuu nageenyi isaanii yaaddoo keessa jiru kantti, sodaa qabamuusaanii ibsuun poolisoonni Oromiyaa kan duraan moorichaa eegaa turan akka deebii'an gaafataniiru.
Mooraa Hammaareessaa keessa lammiilee Oromoo Naannoo Sumaaleerraa buqqaafaman kuma 5tti siqantu jiraataa turan, amma garuu namoonni dhukaasa sana miliqanii keessaa badaniiru, kaanis baqataa jiru jedhan maddeen yaada nuuf laatan kunneen.
Bulchaan Godina Harargee Bahaa Obbo Jamaal Ahamadee rakkoo uumameen namoonni 4 du'anii 11 miidhamaniiru jedhan. Ummanni rakkatee mooraa keessa jiru rakkoo biraaf saaxilamuun roorroo biraa waan ta'eef baayyee nu yaachiseeras jedhaniiru.
''Gochi ummatarratti raawwate seeraan ilaalama. Isaan achi mirga namaarratti taphachuun sirrii miti. Namoota miidhamanis hospitaalatti yaalchisaa jirra'' jedhan.
''Poolisiin Oromiyaa nageenya kaampii kanaa itti siqanii eegu, kan naannoo Harariis daangaa isaaniirra turan. Boodarra erga humni ittisa biyyaa dhufuun booda haalli akkasii kun uumameera,'' jedhan obbo Jamaal.